एकल पुरुषलाई पनि अब मासिक भत्ता ! | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
एकल पुरुषलाई पनि अब मासिक भत्ता !
August 24, 2018 August 24, 2018 Nepal E News
बैतडी । एकल पुरुषलाई पनि अब मासिक भत्ता ! बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई बिदुर भत्ता दिने भएको छ ।
सरकारले एकल महिलालाई भत्ता दिईरहेको सन्दर्भमा नगरपालिकाले एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा ओझाले बताइन् ।
यो खबर आजको राजधानि दैनिकमा छापिएको छ ।
७०बर्ष पछि भने सरकारले नै बृद्ध भत्ता दिने भएकाले नगरपालिकाले दिने भत्ता कटौति गर्ने बताइन् ।
गत साउन महिना देखि लागु हुनेगरि बिदुर भत्ता बितरण गरिने ओझाले बताइन् ।
गाडी खाेला तर्नै लाग्दा बाढी अाएपछि
समाजएकल पुरुषलाई पनि अब मासिक भत्ता !
एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन बनेका बालक फेला